Rsync 3.2.4 dia efa navoaka ary ireto ny vaovao | ubunlog
Rsync 3.2.4 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Aorian'ny fandrosoana herintaona sy tapany ny fanombohana ny ny kinova vaovao an'ny Rsync 3.2.4, dikan-teny misy andiam-panatsarana sy fanamboarana bug.
Ho an'ireo izay vaovao amin'ny Rsync, tokony ho fantatrao fa ity dia fitaovana fampifanarahana sy backup izay manolotra fampitana mahomby amin'ny angon-drakitra fanampiny, izay miasa miaraka amin'ny angon-drakitra voaporitra sy voafehy ihany koa.
Amin'ny fampiasana teknika fanodinana delta dia ahafahanao mampifanaraka ny rakitra sy ny lahatahiry eo anelanelan'ny milina roa amin'ny tambajotra iray na eo anelanelan'ny toerana roa amin'ny milina iray ihany, manamaivana ny habetsahan'ny angona nafindra.
Ny endri-javatra manan-danja amin'ny Rsync izay tsy hita amin'ny ankamaroan'ny programa na protocole dia ny fisian'ny kopia miaraka amin'ny fandefasana iray monja amin'ny lalana tsirairay. Rsync dia afaka mandika na mampiseho lahatahiry misy ary mandika rakitra, raha tsy izany dia mampiasa famatrarana sy recursion.
Miasa toy ny daemon mpizara, i Rsync dia mihaino amin'ny alàlan'ny default amin'ny port TCP 873, manolotra rakitra ao amin'ny protocol Rsync teratany na amin'ny alàlan'ny terminal lavitra toy ny RSH na SSH. Amin'ity tranga farany ity, ny mpanjifa Rsync azo ampiasaina dia tsy maintsy apetraka amin'ny mpampiantrano eo an-toerana sy lavitra.
Vaovao lehibe momba ny Rsync 3.2.4
Amin'ity dikan-teny vaovao ity izay aseho amin'ny Rsync 3.2.4 fomba fiarovana vaovao no natolotra avy amin'ny andalana baiko izay mitovy amin'ny safidy "–protect-args" ("-s") efa nisy teo aloha, fa tsy manapaka ny script rrsync (rsync voafetra).
Ny fiarovana mipoitra amin'ny endri-tsoratra mandositra manokana, ao anatin'izany ny habaka, rehefa mandefa fangatahana amin'ny akora ivelany. Ny fomba vaovao dia tsy afa-mandositra tarehin-tsoratra manokana ao anatin'ny sakana voatonona, mamela anaram-drakitra ho voatonona tsy hitsoaka intsony, ohatra hoe "rsync -aiv host: 'a simple file.pdf' is allow now". Mba hamerenana ny fihetsika taloha, ny safidy "-old-args" sy ny fari-piainan'ny tontolo iainana "RSYNC_OLD_ARGS = 1" dia atolotra.
Fiovana iray hafa miavaka amin'ity kinova vaovao ity ny nampihatra fahaizana manavao ny toetra xattrs ho an'ny rakitra amin'ny fomba vakiana fotsiny raha mahazo alalana hanova ny zo hidirana ny mpampiasa (ohatra, rehefa mandeha ho root).
Nampiana sy navelan'ny mari-pamantarana default "–info=NONREG" hanehoana fampitandremana momba ny famindrana rakitra manokana.
Ny script atomic-rsync dia naverina nosoratana tamin'ny Python ary nitarina tamin'ny fahafahana tsy miraharaha kaody miverina tsy aotra. Ny default dia ny tsy miraharaha ny kaody 24, izay averina rehefa tsy hita ny rakitra rehefa mandeha ny rsync (ohatra, ny code 24 dia averina ho an'ny rakitra vonjimaika izay teo amin'ny fotoana nanondroana voalohany fa nesorina tamin'ny fotoana nanondroana voalohany). ny fifindra-monina).
Namaha olana efa hatry ny ela tamin'ny fikarakarana ireo tarehin-tsoratra isa decimal mifototra amin'ny toerana misy ankehitriny. Ho an'ny sora-baventy natao hanodinana ny endri-tsoratra "." amin'ny isa, raha misy ny fanitsakitsahana ny fifanarahana, azonao atao ny mametraka ny toerana "C".
Ho fanampin'izay, ny vulnerability (CVE-2018-25032) ao amin'ny kaody tafiditra ao amin'ny tranomboky zlib izay miteraka fihoaram-pefy rehefa manandrana manindry ny filaharan'ny toetra voaomana manokana dia raikitra ihany koa.
Nametraka ny safidy "–fsync" hiantso ny fsync() amin'ny hetsika rehetra amin'ny rakitra mba hanesorana ny cache kapila.
Ny script rsync-ssl dia mampiasa ny safidy "-verify_hostname" rehefa miditra openssl.
Nampiana safidy "–copy-devices" handikana ny rakitra fitaovana ho rakitra mahazatra.
Nihena ny fanjifana fitadidiana rehefa mamindra tsikelikely ny lahatahiry kely marobe.
Ao amin'ny sehatra macOS, ny safidy "–times" dia alefa.
Ny script rrsync (rsync voafetra) dia naverina nosoratana tamin'ny Python.
Nampiana safidy vaovao "-munge", "-no-lock" ary "-no-del".
Ny safidy sakana "–copy-links" (-L), "–copy-dirlinks" (-k) ary "–keep-dirlinks" (-K) dia alefa amin'ny alàlan'ny default mba hahatonga ny fanafihana izay manodinkodina rohy an'ohatra mankany amin'ny lahatahiry bebe kokoa sarotra.
Ny script munge-symlinks dia naverina nosoratana tamin'ny Python.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Rsync 3.2.4 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao